Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod in Lugood s
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod in Lugood
My saaxiib ayaa filimada uu iPod. Waxaan doonayaa in aan wareejiyo Lugood Anoo computer iyo. Sidee baan waxan u samaynaysaan?
Si aad u dhan ama videos xulay wareejiyo ka iPod ah in Lugood ee kombiyuutar kasta, waxaad u baahan tahay iPod ah in qalab kala iibsiga computer. Waxaa ka mid ah dhammaan qalabka, Wondershare TunesGo taagan ay ka shaqeynayaan fantastic iyo xog. Sidaa daraadeed, aad eegista wareejin karaan video aad jeceshahay oo aad ka ama kuwa kale ee iPod in Lugood si xor ah oo aan laga badinin wax aad iPod.
Download qalab si ay u gudbiyaan videos ka iPod in Lugood.
Lugood sokow, Wondershare TunesGo sidoo kale ku siinaysaa awood u leh in aad nuqulka videos ka iPod in computer .
Ku rakib this iPod in PC kala iibsiga qalab aad Windows PC. Hadda, raac tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1. Daahfurka iPod si kala iibsiga PC iyo xirmaan iPod la PC
Burcad iPod si qalab kala iibsiga computer on your computer dib markii la rakibey. Markaas, xiriiriyaan iPod la your computer via cable USB ah. Qalabkani waxa uu ogaan doonaa iPod isla markiiba ka dibna u soo bandhigaan uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Transfer filimada ka iPod in Lugood
On line hoose ee suuqa kala aasaasiga ah, guji "Si Lugood". Marka uu furmo suuqa pop-up ka muuqataa, guji "Start". Markaas, sida aad ka arki, waxaad filimada, podcasts, videos music, iwm si Lugood wareejin karaan. sax doonayo aad video files oo guji "nuqul Lugood".
Ama, guji "Media" khaanadda tagay. On line ugu sareeya jira dad badan oo isha. By gujinaya "Movies", "Podcasts", "muujinaysaa TV", "Music Videos" iyo "Lugood U", waxaad ka iPod guuri kartaa file kasta si Lugood. Halkan, waxaan filimada qaado sida tusaale.
Si filimada ka iPod dhaqaaqo Lugood, waa in aad guji "Movies". Markaas, furmo filimka, dooro filimada in aad jeclaan lahaa inuu u dhaqaaqo oo guji saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in". In liiska hoos-hoos u, doortaan "Dhoofinta in Lugood Library".
Hubi in iPod xiran yahay si aad u computer inta lagu jiro kala iibsiga. Markaas videos la soo guuriyeen doonaa in Lugood.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri videos dayanayaan ka iPod in Lugood in muddo ah. Ka sokow, TunesGo (Windows) si buuxda u la jaan qaada iPod taaban socda macruufka 5 / macruufka 6 / macruufka 7 / macruufka 8 / macruufka 9, iPod nano, classic iPod iyo shaandheeyn lagu iPod. More info oo ku saabsan taageeray daydo iPod >> .
Download TunesGo in ay isku dayaan sidii ay u filimada ka iPod wareejiyo Lugood!